"သားသားကြီးလာရင် Game Developer လုပ်မယ်" - MYSTERY ZILLION
"သားသားကြီးလာရင် Game Developer လုပ်မယ်"
February 2010 edited March 2010 in My Article
ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေက ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲလို့ မေးတတ်တယ်။ အများစုက ဆရာ၀န်ကြီးလုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီရာကြီးလုပ်မယ်။ စသည်ဖြင့်ဖြေကြတာပေါ့။ အဲဒါကို သားသားကြီးလာရင် game တွေလုပ်မယ်လို့ ဖြေမိရင် အရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ခု game ဆော့တာတောင် အားမရသေးဘူးလို့ အပြစ်တင်ခံရနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ IT ကိုလဲ စိတ်၀င်စားမယ်၊ games တွေကိုလဲအရူးအမူးကစားမယ်၊ အားတဲ့အချိန်မှာလဲ game အိုင်ဒီရာ အသစ်တွေအမြဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ game developer ဖြစ်ဖို့ ပါရမီပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ တကယ်လဲ game developer ဖြစ်ချင်လို့၊ အဲဒီ career ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်၊ ဇွဲမလျှော့ဘဲ ကျိုးစားမယ်ဆိုရင် တကယ် rewarding ဖြစ်တဲ့ career path တခုပါ။ တကယ်၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက်၊ အလွန်ကျေနပ်စရာ ကောင်းတဲ့အလုပ်တခုပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ game developer ဆိုရင် game ဆော့ရင်း ပိုက်ဆံရနေသူတွေ၊ အချောင်ခိုလို့ရတဲ့ အလုပ်လို့ မြင်နေရင်တော့၊ ဒီလမ်းကို လိုက်ဖို့ ရပ်လိုက်ပါ။ Game developer ဆိုတာ တခြားအလုပ်တွေလိုဘဲ၊ ဉာဏသုံးပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တခုပါ။ တခြားသူတွေလိုဘဲ၊ အားလပ်ချိန်မှာမှ game ဆော့ခွင့်ရမှာပါ။
ဟုတ်ပြီ၊ တကယ် game developer ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်ကစမလဲ။ Game developer လို့သာပြောနေတာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ game developer လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ် job position မရှိပါ။ တကယ်တော့ game တခုကိုဖန်တီးဖို့ မတူညီတဲ့ အောက်က အလုပ်တွေပေါင်းစပ်ထားတာပါ။
Game programmer: သာမန် programmer ယောက်ပါ။ Programming language တခုကျွမ်းကျင်စွာ ရေးနိုင်ရင် game programmer လုပ်လို့ရပါပြီ။ သင်ဟာ programming ကိုစိတ်၀င်စားမယ်၊ သချာင်္တော်မယ်ဆိုရင် game programmer လုပ်သင့်ပါတယ်။
Game Artist: သာမန် CG artist တယောက်ပါ။ 3D modeling, animation, texturing, sculpting ပိုင်ရင် game artist တယောက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ သင့်မှာ အနုပညာပါရမီ ရှိတယ်၊ ဇာတ်ကောင်တွေ၊ environment တွေဖန်တီးရတာကြိုက်ရင် လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပါ။
ဒါတွေပြီးရင် QA tester၊ Producer၊ Sound Artist နဲ့ game mechanic တွေပါ၀င်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ game developer လိုင်းလိုက်ဖို့စဉ်းစားပြီးရင်၊ ခုနကပြောထားတဲ့ programmer နဲ့ artist ကြိုက်ရာ တခုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို game programmer တယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ နဲနဲထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
Game programmer ဆိုတာ တခြား programmer တွေနဲ့ဘာမှမခြားပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ programming language တခုခုကိုကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင်၊ game programmer တ၀က်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ game programmer လုပ်ဖို့ဘယ် language ကိုလေ့လာရမလဲ? ဒီမေးခွန်းကို မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ programming language ကို တကယ်မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ Language ဟာတကယ်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး၊ တကယ်က programming concept တွေကျွမ်းကျင်နေဖို့သာ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ game programmer တွေသုံးနေတဲ့ တချို့ languages တွေကို ပြောပြရရင် C/C++၊ C#၊ Java၊ ActionScript၊ ObjectC၊ PHP၊ Python၊ SQL၊ နဲ့တခြား propriety scripting language တွေလဲသုံးကြပါတယ်။ ဒီတော့ တခြား programming အလုပ်တွေနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဒီတော့ programming language တခုကိုရွေးလိုက်ပါ (C/C++ (သို့) C# ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်)။ ပြီးရင် programming ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ရေးနိုင်အောင်အရင် ကျိုးစားပါအုံး။
Programming ရပြီဆိုရင်တော့၊ Graphic API တွေလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ Graphic API က game programming ရဲ့အသက်ပါ။ ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတာ မှန်သမျှ graphic API သုံးပြီးရေးမှာမို့လို့ပါ။ Graphic API မှာအဓိကသုံးနေတာ DirectX နဲ့ OpenGL ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား propriety API တွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အများစုက DirectX သို့မဟုတ် OpenGL ကိုမှီးပြီး extend လုပ်ထားတာများပါတယ်။ DirectX နဲ့ OpenGL တောင် အခြေခံ concept ကအတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ graphic API တခုခုကိုလေ့လာထားရင်၊ ကျန်တဲ့ API တွေလဲအလွယ်တကူ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Google ထဲမှာသာ DirectX (သို့) OpenGL လို့ရိုက်ထည့်လိုက်၊ တက်လာသမျှ လေ့လာပေတော့
Programming နဲ့ graphic API နှစ်မျိုးလုံးရပြီဆိုရင်၊ games တွေရေးတော့လို့၊ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါ။ တကယ်၀ါသနာပါသူဟာ၊ လေ့လာရင်း game အသေးလေးတွေ ရေးဖြစ်နေမှာပါ။ Game လေးတွေလျှောက်စမ်းရင်နဲ့ လုပ်ချင်တာလေးတွေ တွေ့လာပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စစ်တိုက်တဲ့ game မှာ unit တွေလမ်းကြောင်းမရှာနိုင်ဖြစ်နေလား? ဒါဆိုလိုနေတာ A* algorithm ပါ။ ဒုံးပျံပြစ်ဖို့ခက်နေသလား၊ vector mathematic သုံးကြည့်ပါ။ ရန်သူ AI ဘယ်လိုရေးမလဲ? State machine သုံးကြည့်ပါ။ စသည်ဖြင့်ပေါ့၊ game ရေးတဲ့အခါ သူနေရာနဲ့သူသုံးရမဲ့၊ technique လေးတွေရှိပါတယ်။ အုန်းနောက်ချောက်ခံပြီး တယောက်ထဲကျိတ်စဉ်းစား မနေပါနဲ့။ Internet မှာရှာကြည့်ပါ။ Forums တွေမှာမေးပါ။ ဒီလို game programming မှာသုံးတဲ့ technique တွေစုထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ ညွန်းရမယ်ဆိုရင် Core Techniques and Algorithms in Game Programming by Daniel SГЎnchez-Crespo Dalmau (ISBN : 0-1310-2009-9) ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒါဆို game developer ပေါက်စလေးဖြစ်ပြီဆိုပါဆို့။ တကယ့်ပြင်ပမှာ ပိုက်ဆံရတဲ့ professional game developer တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ဒီအတွက် သင့်မှာရွေးချယ်ရမဲ့ လမ်း (၃) လမ်းရှိပါတယ်။
Indie: အင်ဒိုင်းလို့အတိုခေါက်ခေါ်တဲ့၊ independent game developer အဖြစ်ရပ်တည်မလား? Independent game developer ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် game တွေထုတ်၊ ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ရပ်တည်နေတာပါ။ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ပိုက်ဆံကိုမျှော်ပြီးလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့် game ကိုဆော့မဲ့ player တွေဆီတိုက်ရိုက်ရောင်းပြီး ပိုက်ဆံရှာတာပါ။ ရပ်တည်ဖို့ အရမ်းခက်ပြီး၊ အောင်မြင်ရင်လဲ အရမ်းစိတ်ကျေနပ်စေမဲ့ အလုပ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတောင် ဒီလိုအောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်တဲ့သူ အနည်းငယ်သာ ရှိတာကို ကြည့်ချင်းဖြင့် ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
Freelancing/Contracted: တကယ်လို့ သင်ဟာနိုင်ငံခြားထွက်ပြီး မလုပ်ချင်ဘူး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကို နေချင်တယ်။ Indie လဲမရပ်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင် outsourcing project တွေလက်ခံပြီးလဲ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ကောင်းဖို့ တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မိဘနဲ့မကွဲဘဲနေနိုင်ပြီး၊ တော်ရင်တော်သလို နိုင်ငံခြားထွက်လုပ်တာထက်တောင် ၀င်ငွေကောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ Game အလုပ်ဟာ ဒီမှာနေပြီး၊ online ကနေ contract လုပ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံး အလုပ်တခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ သူက online ကနေဘဲ file အပေးအယူလုပ်၊ presentation လဲပြစရာမလို၊ tech-support လဲပေးစရာမလိုတဲ့ အလုပ်ပါ။
Working atagame company: နိုင်ငံခြားကိုဘဲ သွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလဲ game developer အလုပ်ဟာ၊ အလုပ်ရဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ game company တွေရှိတယ်။ Singapore နဲ့ China မှာ EA၊ Ubisoft လို game company အကြီးကြီးတွေရဲ့ လက်ခွဲတွေရှိတယ်။ ဒီတော့အလုပ်ရဖို့ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တခုပါ။ ကိုယ်သာကျွမ်းကျင်ပါစေ၊ အလုပ်မရှားပါဘူး။ တခြား level တူ programmer အလုပ်တွေထက်တောင် လခကောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်၀ါသနာပါတာလဲ လုပ်ရတဲ့အတွက် သင်စိတ်တိုင်းကျနိုင်မှာပါ။
ဒီ (၃) လမ်းကိုခွဲခြားပြလို့၊ တခုစီသာ လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင်ဟာ နေ့ဘက်မှာ game company မှာ full-time လုပ်မယ်၊ ညဘက်ရောက်တော့ contract ရေးမယ်။ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ သင်ရဲ့ indie game လေးကို funding လုပ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလို professional သွားနိုင်ဖို့၊ ဘာလိုအပ်မလဲ? ဒါကို စကားတလုံးနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Experience ပါ။ Game နဲနဲရေးတတ်တဲ့ အချိန်ကစပြီး၊ game တွေသာတခုပြီးတခု ထိုင်ရေးပေတော့
တခုတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ Game တခုရေးရင်၊ အပြီးမသတ်ဘဲ နောက်တ game ပြောင်းရေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ရှောင်ပါ။ Game တခုစပြီးရင်၊ ပြီးအောင်ရေးပါ။ ပြီးအောင်ရေးနိုင်ဖို့ secret ကတော့ အလွယ်ဆုံး၊ အသေးဆုံး game လေးတွေစရေးပါ။ အဆုံးသတ်နိုင်ပြီဆိုရင် နဲနဲဒီထက် ခက်တာရေးပါ။ သင်ပထမဆုံးရေးတဲ့ game က world of warcraft ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ Tic-tac-toe game လေးကိုပြီးအောင်ရေးနိုင်ရင်ဘဲ၊ သင်ဟာ အောင်မြင်တဲ့ game developer တယောက်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ် game လေးတောင် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရေးနိုင်တဲ့ game developer အရေအတွက်ကို သင်သိရင် အံ့အောသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ပိုင် game တခုလုပ်ဖို့၊ သင့်မှာ graphic တွေမရှိဖြစ်နေပါသလား? ကိုယ်တိုင် artist ကော၊ programmer ကောဖြစ်အောင်ကျိုးစားမနေပါနဲ့။ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။ သဘောသဘာ၀ချင်း သိပ်ကွာခြားနေတဲ့ အလုပ်နှစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီတော့ internet က free ရတဲ့ graphic တွေသုံးပါ။ Photoshop တော့သိဖို့လိုပါမယ်။ 3D အတွက်ဆို Poser ရှိပါတယ်။ Free ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံအနဲငယ်နဲ့ လိုချင်တဲ့ graphic တွေ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ Game artist ဆိုလဲ game တခုကိုအစအဆုံးရေးဖို့ ကျိုးစားမနေပါနဲ့၊ Game engine တွေရှိတယ်၊ တခြား game တခုခုကို Mod လုပ်နိုင်တယ်။ Scripting လောက်တော့သိဖို့လိုပါမယ်။
Game developer လုပ်ဖို့၊ ခုရေတွင်းတူး၊ ခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့ မရပါ။ Game programming ကိုလေ့လာဖို့အနဲဆုံး ၂-၃ နှစ်လောက်အချိန်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင် portfolio တွေရှိလာဖို့၊ အလုပ် experience ရှိလာဖို့၊ နောက် ၃နှစ်လောက် အချိန်ပေးရပါအုံးမယ်။ အနဲဆုံးတော့ သင် ၅ နှစ်လောက်ရင်နှီးမြုတ်နှံရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ၀ါသနာပါရုံနဲ့မရဘဲ၊ ဇွဲရှိဖို့ သိပ်လိုပါတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်နဲ့ developer ဖြစ်ဖို့တော့ သင် ၁၀ နှစ်လောက် practice လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ငယ်ငယ်က "သားသားကြီးလာရင် Game Developer လုပ်မယ်" လို့တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သင့်တော်တဲ့ အတွေးတခုပါ။ Game developer အလုပ်ဟာ၊ ရှားပါးအလုပ်၊ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုမဟုတ်ပါ။ ၀ါသနာပါပြီး၊ ဇွဲမလျှော့ရင် အောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ game developer အလုပ်ဟာ၊ တခြားအလုပ်တွေထက်တောင် ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုပေးစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ game လေးကို store ဆိုင်မှတင်ထားတာ၊ သူများတွေဆော့နေတာ၊ forums မှာ discuss လုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရင် ရတဲ့ပီတိက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး။
Thanked by 1 DeathWings
wow. nice bro..
အောင်မြင်စွာနဲ့ လူလားမြောက်လာတာ မြင်ရတာ ဘာနဲ့မှ မလည်းနိုင်တဲ့ ပီတိ တမျိုးပါ
ပညာရပ်တစ်ခုကို ရှင်းပြပေးတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ် မဟုတ်ပါ